Shaja kabusha iselula ye-Telcel kalula futhi ngokushesha
Namuhla, ukushaja kabusha iselula ye-Telcel kulula kunangaphambili. Uma ungomunye walabo bantu abachitha amahora besebenzisa ifoni noma bengathandi nje ukuphelelwa ibhalansi, lapha uzothola zonke izinketho zokuhlala uxhumekile.
Ungakwazi khokha ibhalansi kuselula yakho usebenzisa i-inthanethi noma ngokuvakashela izindawo ezigunyaziwe eduze nendawo ohlala kuyo noma emsebenzini, qhubeka ufunda ukuze Ungalokothi uphelelwe amakholi noma idatha!
I-Telcel yinkampani yezokuxhumana yaseMexico futhi umhlinzeki wokuqala wezokuxhumana eLatin America. Namuhla sizobe sichaza konke okudingeka ukwazi ngakho gcwalisa kabusha iselula Telcel ngokushesha futhi ngokuphepha.
Shaja kabusha i-Telcel mobile online
Ukushaja kabusha i-Telcel ku-inthanethi, udinga kuphela ukuba nekhompyutha noma i-smartphone enokufinyelela ku-inthanethi kanye nekhadi lesikweletu (likazwelonke noma lamazwe ngamazwe). Ungakwazi futhi ukugcwalisa ikhadi lakho lasebhange, kodwa okokuqala kufanele uqinisekise nebhange lakho uma ikhadi ligunyazwe ukuthenga ku-inthanethi.
Uma ikhadi lakho lihlangabezana nazo zonke izimfuneko, qondisa isiphequluli sakho ku telcel.com/recharge bese ulandela izinyathelo ezisebhokisini elihambisanayo:
1.- Bhala inombolo yakho yeTelcel bese uyiqinisekisa
2.- Khetha inani ozolishajwa kabusha ohlwini lokudonsela phansi bese uchofoza "okulandelayo"
3.- Nikeza imininingwane yokukhokha futhi uqinisekise ukushajwa kabusha. Emizuzwini engemingaki uzothola ukushajwa kwakho kabusha okuyimpumelelo kwebhalansi yomngane wakho
Shaja kabusha i-Telcel yeselula ezitolo nasezindaweni ezigunyaziwe
Kukhona eziningi izikhungo ezigunyazwe ukushajwa kabusha iTelcel, kungaba ngokheshi noma ngekhadi lakho lasebhange noma lesikweletu.
Ukuze uthole izinkokhelo zemali, kufanele unikeze othatha imali esitolo inombolo ye-Telcel enezinhlamvu ezingu-10 lapho uzophinde ushaje ibhalansi, ukhethe amanani aqondile, isibonelo, $ 20, $ 30, $ 50, $ 100, $ 150, $ 200, $300 noma $500.
Uma inkokhelo yenziwa ngekhadi, Kufanele uqiniseke ukuthi isikhungo esigunyaziwe sinetheminali yamakhadi edebhithi noma esikweletu. Ekupheleni kwenkokhelo, uzothola Umlayezo Wombhalo (SMS) oqinisekisa ukuthi ukuthengwa kwebhalansi kube yimpumelelo.
Shaja kabusha i-Telcel kulayini wakho, kunoma yisiphi kulezi zikhungo ezilandelayo: Bodega Aurrera, Coppel, Chedraui, Dorians, Elektra, El Portón, Famsa, Fábrica de Francia, Liverpool, Gasolinerias Petrored, Mixup, Oxxo, Office Depot, Ragazzi, Pagatodo , Sanborns, Sam's Club, Soriana, Sears, Superama, Suburbia, Vips, Telmex, Waldo's, Wal-Mart nakuzo zonke lezo zindawo ezihlonzwe ngale logo.
Ungase futhi uthole indawo Izikhungo zesevisi yamakhasimende ze-Telcel kusuka kukhompyutha yakho, ngokuchofoza lapha. Khetha ohlwini oludonsela phansi isimo nedolobha lapho ukhona kanye ne-voila.
Shaja kabusha ezikhungweni zamabhange
Uma kufanele uye ebhange, ukusizakala futhi ukushajwa kabusha ku-ATM. Inani lizodluliselwa futhi lizokhokhiswa ku-akhawunti yakho yasebhange. Ekupheleni kwenkokhelo, uzothola Umlayezo Wombhalo (SMS) oqinisekisa ukuthi ukushajwa kabusha kube yimpumelelo.
Gcwalisa ngohlelo lokusebenza Lokudlulisa
With isicelo Dlulisa, etholakala ku-Google Play naku-App Store, ukushaja kabusha iselula ye-Telcel kulula kakhulu. Kuphela Kufanele uvule u-Dlulisa ngokushayela u-*4040 ku-Telcel yakho futhi uma isicushiwe yenza lezi zinyathelo ezi-2:
1.- Thumela Umlayezo Wombhalo (SMS) enombolweni ethi 4040 enegama elithi RECHARGE, ulandelwe yimali ofisa ukuyikhokha.
2.- Faka i-PIN Yokudluliswa kwakho ukuze uqinisekise ukusebenza.
Ekugcineni, uzothola i-SMS eqinisekisa ukuphumelela komsebenzi.
Shaja kabusha i-Telcel ngomlayezo wombhalo (SMS)
Ukuze ushaje kabusha iselula ye-Telcel ngokuthumela i-SMS, udinga ube nekhadi elibhalisiwe I-Telcel yami. Uma ungenzanga kanjalo, bhalisa ngokushesha futhi ujabulele le nzuzo.
Uma uhlangabezana nezidingo, Thumela umlayezo wombhalo (SMS) ku-3434 Ngezinombolo ezine zokugcina zekhadi lakho, shiya isikhala bese ubhala inani lokushajwa kabusha.
Uma yonke inqubo ilungile, uzothola i-SMS eqinisekisa ukushajwa kabusha.
Dlulisela ibhalansi kumngane (PasaTiempo)
Thumela umlayezo wombhalo (SMS) ku-7373 Ngenombolo yomngane wakho wakwaTelcel, shiya isikhala esingenalutho bese ubhala inani ofuna ukulithumela ($ 20, $ 30, $ 50, $ 100, $ 150, $ 200, 300 noma $ 500). Uma ukudlulisa kube yimpumelelo, wena nomngane wakho nizothola i-SMS eqinisekisa ukusebenza.
Inkokhelo yokuthumela i-PasaTiempo ingu-$5.00 kufakwe ne-VAT futhi idonswa kubhalansi yomngane wakho uma ungumsebenzisi okhokhelwa kusengaphambili; futhi uma ungumsebenzisi okhokhelwa ngeposi, inkokhiso iya ku-invoyisi yakho.
Phezulu kuselula » Okwelinye izwe » Shaja kabusha iselula ye-Telcel kalula futhi ngokushesha